Haween badan oo lagu dilay Ceel Afweyne iyo ragii dilay qaarkood oo la qabtay – Kismaayo24 News Agency
Haween badan oo lagu dilay Ceel Afweyne iyo ragii dilay qaarkood oo la qabtay
by admin 13th August 2019 024
Deegaanka Ceel Afweyn ee gobolka Sanaag waxaa wali ka taagan colaad la xalin waayay oo u dhaxeysa labo beelood oo halkaasi wada dega, colaada ayaana marba marka ka dambeysa wajo cusub sii yeelaneysa.
Maleeshiyaad hubeesan ayaa shalay deegaanka Ceel Afweyn ku dilay 7-qof oo shacab ah oo afar kamid ah dumar ahaayeen , dilkan ayaana dhaliyay caro xoogan oo ka timid shacabka iyo maamulka Somaliland.
Madaxweyne ku xigeenka Somaliland, Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) ayaa cambaareeyay falkan lagu laayay afarta haweenka iyo sadexda raga, waxa uuna tacsi u diray ehelada dadkii ay ka geeriyoodeen dadka la laayay.
Saylici ayaa sheegay in Ciidamada amnigu ay gacanta ku soo dhigeen qaar ka mida dablaydii geysatay fal-danbiyeedkaa foosha xun, laguna daba jiro intii kale, waxa uuna xusay in ay socdaan hawl-galka lagu baadi goobayo hadraaga.
Madaxweyne kuxigeenka Somaliland ayaa ugu baaqay ehelada dadkooda ku waayey falkaasina inay dejiyaan xaaladooda kana war-sugaan hawl-galka ciidamada wadaan si dadkaasi dilka geestay sharciga loo horgeeyo.
Waxa uu amray Madaxweyne ku xigeenku ciidamada amaanka iyagoo gudanaya waajibaadkooda inay sugaan nabadgelyada deegaankaasi, cid kasta oo falal amni daro ku hawlana ay gacan bir ah ku qabtaan.
lixdan iyo dhawr jir badbaadiyey Boqolaal muslimiin ah.
Dhageyso: Janaral Galaal Habargidir oo heshiisay waa Somaliya oo heshiisay.
XOG CULUS: Akhriso k24 oo Heshay Warmurtiyeedka lagu wado in laga soo saaro Shirka Madasha Wadatashiga Qaran ee Muqdisho ka Socda
Tifaftiraha K24 3rd June 2016 3rd June 2016
Daawo Sawirrada: Qaraxii ka dhacay agagaarka madaxtooyada villa soomaliya iyo qasaaraha ka dhashay
Tifaftiraha K24 21st March 2017
Ciidamada Dawladda Soomaaliya oo saakey amar ku bixiyey in shacabku aaney mari karin waddada weyn ee Maka-Al-mukaramma
admin 19th April 2015 27th August 2015